Hatreto dia tsy misy datim-pitsarana raikitra momba azy, vao mainka indray aza mitovana ny fitoriana an’i Alain Ramaroson taorian’ny nidirany teny Antanimora. Tsy ho alohan’ny frankôfônia aloha, raha ny loharanom-baovaonay. Ny loharanom-baovao hafa indray milaza fa mety hanao krismasy ao Antanimora ity filoha nasionalin’ny antoko Masters ity. Nifangaro tamin’ireo besinimaro voafonja i Alain Ramaroson tamin’ny nidirany tao Antanimora. Taty aoriana dia nafindra ao amin’ny kartie fantatra amin’ny anarana hoe : “Maputo”, nametrahana ireo gadra politika sivily sy miaramila tamin’ny tetezamita.